Madaxweynaha oo Eedeeyey kasoo Jeediyey guddiga farsamada iyo xulitaanka baarlamaanka | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Friday, August 17th, 2012 at 11:52 am Madaxweynaha oo Eedeeyey kasoo Jeediyey guddiga farsamada iyo xulitaanka baarlamaanka
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta ka hadlay shaqada guddiga farsamada iyo xulitaanka baarlamaanka iyo dhammeystirka marxaladda KMG ah, kaddib kulan uu la qaatay ergayga qaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Dr. Agostine Mahiga.
Shir jaraa’id oo ay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo Danjire Mahiga ku qabteen xarunta madaxtooyada ayuu madaxweynuhu ku sheegay in guddiga TSC-du ay shaqadoodu tahay kaliya inay hubiyaan in xubnaha baarlamaanku ay buuxiyeen shuruudihii lagu heshiiyay (criteria), shirarkii Garowe, Galkacyo, Adis Ababa iyo Nairobi.
“Waxaan isla garanay in 20-ka Agoosto marka loogu yaryahay Baarlamaanka aan heysano, heshiisyadii Garowe, Gaalkacyo, Adis Ababa iyo Nairobi in la ixtiraamo, guddiga farsamadu waxay leeyihiin inay criteria-da dadka u fiiriyaan, awood intaas ka baxsan malaha, hadday wax khilaafa yimaadaana guddiga odayaasha ah ee u xilsaaran ayaa iska leh” ayuu yiri madaxweynuhu.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inaan la aqbali Karin in shaqsiyaad gaar ah la bartilmaameedsado oo loo diido inay baarlamaanka ka mid noqdaan, wuxuuna yiri.
“(Waxaan ka wada hadalnay) Inaysan jiri Karin lana aqbali Karin in qof ama shaqsi ama koox la bartilmaameedsado, wax walbana ay ku dhammaadaan sidii loogu talo galay”
Madaxweynaha ay saxaafaddu weydiisay in baarlamaanka cusub ay ka mid noqon karaan hoggaamiye kooxeedyadii dalka, wuxuu sheegay in loo baahan yahay inaan la siyaasadeyn arrinta ee loo fiiriyo qof kasta inuu buuxiyay wixii lagu heshiiyay.
“ Marka la rabo qof in la eedeeyo waa in maxkamad caddaalad ah ay xukuntaa, marka qof ay maxkamad caddaalad ah xukuntay ma jiraa oo la dhihi karo dambiile waaye, waxaa laga hadlaayayna waxay ahaayeen dambiilenimo, marka waxaa la rabaa inaan la siyaasadeyn oo qorshaha sida uu yahay loo wado” ayuu yiri madaxweynuhu.
Danjire Mahiga oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa sheegay in masuuliyadda soo xulidda baarlamaanka ay leeyihiin kaliya odayaasha dhaqanka, isla markaana aan la aqbali Karin in si gaar ah loo bartilmaameedsado shakhsiyaad ama dad gaar ah.
“ Waa odayaasha dhaqnka kaliya, kuwa iska leh masuuliyadda magacaabidda 275-ta xildhibaan, sida madaxweynuhu sheegay ma jiri karto wax qof bartilmaameedsi ah, tanina waa waddada kaliya ee horay loogu soconayo” ayuu yiri Danjire Mahiga oo sheegay in madaxweynaha uu leeyahay hoggaaminta dhammeystirka marxaladda KMG ah.
media@presidency.gov.so 2 Responses for “Madaxweynaha oo Eedeeyey kasoo Jeediyey guddiga farsamada iyo xulitaanka baarlamaanka”
Geesiga 2012 says:	August 18, 2012 at 5:34 am	Madaxweeynaha ayaa leh hogaaminta dhameeystirka, taas macnaheeda waxa waaye inta dhiman isagaa soo magacaabaya si aay u codeeyaan wahaa hubaa in %30 si qaas ah loo siiyey Shariif Shiikh axmed, iyo %40 oo uu ka heeysto beelaha kale sida //, ”iyo ”, ;; iyo beesha Shanaad.
dhagax kariye 1 says:	August 18, 2012 at 7:57 am	Sharif wuxuu is yiri dambilayasha lashegayo armad soogasha,ileen waa hognki mxkamadehee. Saa darteed buu uyiri macaa qab qablayashu danbi malaha . *$